Hutano, 01 Gumiguru 2018
Muvhuro 1 Gumiguru 2018
Gunyana 29, 2018
Mapurisa Anorova Zvakaipisisa Muzvinabhizinesi kuNyanga
Mumwe muzvinabhizinesi weku Watsomba mudunhu reMutasa Central, VaTawanda Terera, vanonzi vakatorwa nechisimba nemapurisa nezuro manheru vachinzi motokari yavo yakaonekwa pachikoro chakabiwa zvinhu munharaunda yavanogara.
Madzimai Anoshanyira South Africa Onyunyuta neKurambidzwa Kupinda neMapiritsi eKuronga Mhuri
Madzimai ari kushanya kuSouth Africa haasi kufara nekutorerwa mapiritsi ekuronga mhuri kwaari kuitwa nevashandi vanoona nezvekupinda nekubuda kwevashanyi muSouth Africa.
Dynamos Inodzinga Murairidzi Wayo, Lloyd Mutasa
Mutungamiri weDynamos, VaSolomon Sanyamandwe, vati Mutasa akakundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake, George Chigove, ndiye ari kutora basa rasiiwa naMutasa.
Kanzuru yeHarare Yovimbisa Vagari Mvura Yakawanda
Kanzuru yeguta reHarare inoti mumasvondo maviri anotevera inenge yave kuwedzera mvura yakachena yainosvitsa kuvagari veguta nemagaroni anoita mamirioni makumi manomwe nemashanu.
Paramende yatanga basa nhasi nhengo dzeNational Assembly dzichizeya mashoko emutungamiriri wenyika pakuvhura paramende svondo rapfuura uyewo mumiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vachiti hurongwa hwaVaEmmerson Mnangagwa kudare iri hwakanaka chose.
Migwagwa yose iri pedyo nemuzinda weUnited Nations yainge yakavharwa nezuro kwakazara mapurisa nevasori sezvo mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vainge vachitaura kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly.
Vakawanda muHarare Votora Matanho Vachizivirira Kupararira kweKorera
Vanhu vakawanda vanogara muHarare vari kutora matanho okuti vasabatira chirwere chekorera kana kuchitapurira vamwe. Chirwere ichi chauraya vanhu vakawanda vazhinji vavo vari vemumisha yeGlen View neBudiriro muHarare.
Veruzhi Vokurudzirwa Kuti Vaite Zvehutsanana Senzira Yeku Rwisa Kupararira kweKorera
Chirwere chekorera chaura vanhu vanosvika makumi mana nevashanu, makumi mana nevatatu vari vemuharare chete.
Mapurisa Oswera Achitandanisa Vanotengesa Mumigwagwa kuMasvingo
Vanotengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanoti vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu zvavo.